विश्वकप छनोट समूह चरणका ११ स्टार खेलाडीको सूचीमा पारस खड्का,कुन देशवाट को परे ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
विश्वकप छनोट समूह चरणका ११ स्टार खेलाडीको सूचीमा पारस खड्का,कुन देशवाट को परे ?
काठमाडौं । जिम्बाम्बेमा जारी आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनोटका लागि भएका खेलहरूमा १० देशमध्ये ६ देश सुपर सिक्समा प्रवेश गरेका छन् भने बाँकी टिम बाहिरिएका छन्। समूह ‘ए’ बाट वेस्ट इन्डिज, आयरल्यान्ड र युएई सुपर ६ पुगेका छन भने नेदरल्यान्ड्स र पपुवा न्युगिनी बाहिरिएका छन्। समूह ‘बी’ बाट जिम्बावे, स्कटल्यान्ड र अफगानिस्तान सुपर ६ मा पुग्दा नेपाल र हङकङ बाहिरिएका छन्।
सोमबार सकिएको समूह चरणको खेलमा सहभागी १० राष्ट्रका केही खेलाडीले तारिफयोग्य प्रदर्शन गरेको आइसिसिले जनाएको छ। आइसिसीका अनुसार उत्कृष्ट खेल्ने ११ खेलाडीको सूचीमा नेपाली कप्तान पारस खड्कासमेत परेका छन्।
समूह चरणमा भएका २० खेलमा केही खेलाडीले तारिफयोग्य प्रदर्शन गरेका छन्। आइसिसीले उत्कृष्ट खेलेका ११ खेलाडीको सूचीमा जिम्बावे र हङकङका २–२ खेलाडी छन्। आयरल्यान्ड, पपुवा न्युगिनी, स्कटल्यान्ड, नेपाल, युएई, अफगानिस्तान र वेस्ट इन्डिजका १–१ खेलाडी सूचीमा समावेश छन्। ९ देशका खेलाडी सूचीमा पर्दा नेदरल्यान्ड्सका कुनै पनि खेलाडी समूह चरणको उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीको सूचीमा समावेश छैनन्।
३३ वर्षीय पोटरफिल्ड आयरल्यान्डका कप्तान हुन्। पछिल्लो एक दशकदेखि आयरल्यान्ड क्रिकेट टिमका लागि योगदान दिइरहेका पोटरफिल्डले यसपटको छनोट चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। आयरल्यान्डका कप्तानसमेत रहेका उनले विश्वकप छनोटमा पपुवा न्युगिनी विरुद्ध शतक प्रहार गर्ने क्रममा उनले १ सय ११ रन जोडे। अर्को खेलमा उनले युएईविरूद्ध ९२ रनको पारी खेले। नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध ४७ रन प्रहार गरेका उनी वेस्ट इन्डिज विरुद्ध डकआउट भएका थिए।
उराले विश्वकप छनोटको आफ्नो दोस्रो खेलमा आयरल्यान्ड विरुद्ध शतक प्रहार गरेका थिए। ओपनर उराले १ सय ५१ प्रहार गरेपछि पपुवा न्युगिनीले २ सय ३५ रन जोडेको थियो। उराको शतकका बाबजुद पपुवा न्युगिनी खेलमा पराजित भएको थियफ। तर उनी खेलको म्यान अफ दि म्याच भए। नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध ३७ रन प्रहार गरेका उनी वेस्ट इन्डिज विरुद्ध ३ रनमै आउट भएका थिए।
स्कटल्यान्डका टपअर्डर ब्याट्सम्यान म्याकलियोर्डले पहिलो खेलमा अफगानिस्तान विरुद्ध नटआउट १ सय ५७ रन प्रहार गर्दै प्रतियोगितामा उत्कृष्ट सुरूवात गरे पनि समूह चरणका पछिल्ला तीन खेलमा राम्रो खेल्न सकेनन्।उनकै उच्च प्रदर्शनले स्कटल्यान्डले अफगानिस्तानमाथि सानदार जित हात पारेको थियो। उनको यो स्कोर स्कटल्यान्डको दोस्रो व्यक्तिगत उच्च स्कोर हो।
समूह चरणमा उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेका टेलरले पहिलो खेलमा नेपालविरुद्ध ९१ बलमा शतक बनाएका थिए भने अफगानिस्तान विरुद्ध ९१ रन बनाए। यस्तै हङकङ विरुद्ध ४६ रन बनाएका उनले स्कटल्यान्ड विरुद्धको अन्तिम खेलमा ४४ रन प्रहार गरेका थिए। उनले समूह चरणको ४ खेलमा कुल २ सय ७९ रन जोडे।
आयोजक जिम्बावे विरुद्ध ८७ रन प्रहार गरेका हङकङका कप्तान अंशुमानले अफगानिस्तान विरुद्ध ६५ रन जोडे। त्यसपछि दुई खेलमा राम्रो खेल्न नसकेका उनी स्कटल्यान्ड विरुद्ध डकआउट भए भने नेपाल विरुद्ध १ रनमै आउट भएका थिए। दुई टेस्ट टिम विरुद्ध अर्धशतक प्रहार गरेका अंशुमानलाई आईसिसिले उत्कृष्ट सूचीमा राखेको छ।
नेपाल विरुद्ध ३ विकेट लिँदै १ सय २३ रन जोडे जिम्बावेका अलराउन्डर राजा आइसिसिको उत्कृष्ट ११ सूचीमा परेका छन्। अफगानिस्तान विरुद्ध पनि ६० रन बनाएका उनले ३ विकेट लिए।
वान डे अन्तर्राष्ट्रियमा १०० विकेट लिएका अफगानिस्तानका अलराउन्डर नाबीले टिमका उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। पहिलो खेलमा ९२ रन बनाएका उनले दोस्रो खेलमा ५१ रन बनाए। तेस्रो खेलमा ३८ रनमा आउट भएका उनले नेपाल विरुद्ध ३४ रन प्रहार गर्दै ४ विकेटसमेत लिएका थिए।
आफूले खेलेका सबै खेलमा विकेट लिएका हङकङका अफ स्पिनर खानले स्कटल्यान्ड विरुद्ध ३र२९, अफगानिस्तान विरुद्ध ४र३३, जिम्बावे विरुद्ध २र५१ र नेपाल विरुद्ध २र३४ को स्पेलमा बलिङ गरे।समूह चरणमा ११ विकेट लिएका उनी सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा छन्। उनलाई आइसिसिले उत्कृष्ट ११ को सूचीमा राखेको छ।
एजेन्सी । आगामी बिहीबारबाट सुरु हुने फिफा विश्वकप नजिकिँदै गर्दा मानिसहरुले को जित्ला भनेर आ–आफ्ना […]